Ku dejiso Rajo heshiis Ogolaasho | Martech Zone
Axad, Maarso 22, 2009 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Suuqgeeye ahaan, waxaad u badan tahay inaad ku tiirsan tahay codsiyo badan oo dhinac saddexaad ah iyo ilo si aad ololahaaga ugu noolaato.
Hore ayaan wax uga qoray sida dejinta rajooyinkaaga macaamiishaadu waxay keenaysaa qanacsanaanta macaamiishaAlso Waxa kale oo jira waddo aad gacan uga geysan karto waditaanka qanacsanaantaada - dhisida heshiis aqbalaad ah si aad ula jaanqaado xiriirkaaga dhinac saddexaad.
Heshiisyada aqbaliddu waxay dejinayaan qaar ka mid ah xeerarka ciyaarta ee iibiyeyaasha aad la shaqeysid xitaa inta aadan bilaabin. Heshiisyada aqbaliddu waxay ka kooban yihiin waxyaabo ay ka mid yihiin:
Ayaa leh hanti aqooneed mashruuc.
Ayaa iska leh ilaha (sawirada, koodhka, iwm.)
In dib u dhigista bixinta ama ganaaxa la fulin doono iyo in kale haddii aan shaqada lagu dhammeynin waqtigii lagu ballamay.
Goorma iyo sida kheyraadka loo wareejinayo hadii xiriirku uu aado koonfur.
Inuu yahay qofka saddexaad wakiilka mashruuca iyo inuu u shaqeeyo shirkado ama ilo kale.
Inay tahay iyo inkale qofka sedexaad inuu kobcin karo shaqada ay qabanayaan.
Laga yaabee inaad xitaa leedahay waxyaabo shaqsiyadeed oo aad jeceshahay ama aad neceb tahay markaad la shaqeyneyso iibiyeyaasha, waqtiga kulanka, xeerarka lebiska, dukumiintiyada, qaababka, iwm. Lahaanshaha heshiis ogolaansho caadi ah oo lagu bilaabayo xiriir lala yeesho waratadaada ayaa kaa badbaadin doonta xoogaa madax xanuun ah iyo xitaa inaad ka fogaato arrimaha sharciga qaarkood. wadada. Waxaan kula talin lahaa iyaga!
Sida heshiis shaqo oo aad la gasho shaqaalahaaga ayaa ka fogaan doonta isku dhaca shaqaalaha, heshiiska aqbalaadda ayaa ka fogaan kara arrimaha iibiyaasha iyo ilaha saddexaad.
Tags: qaybinta saxaafaddaSuuq Goobid
Doug, ma akhrinaysaa buug maarayn mashruuc ah? Hadda, ha bar-qorin berri wax ku saabsan baaxadda mashruuca ama waan ogaan doonaa inaad tahay. Waxa aad dhahdo waa run oo qofkasta oo leh xirfado maarayn adag oo mashruuc adag wuu aqoonsan karaa tan.
Waxay u egtahay wax fudud in la sameeyo, laakiin maahan. Gaar ahaan marka mashruuca aan si fiican loogu qeexin natiijooyinka la doonayo.
Waxaan ku arkay dhibaatooyin aad u waaweyn sida aad halkan uga hadasho oo ku saabsan sawiro gaar ahaan. Ka dib markii dib loo farsameeyo oo isbeddellada la sameeyo, yaa iska leh? Go'aaminta horusocodkan waxay umuuqataa shaqo caajis ah laakiin runtii way xalin kartaa xaalada dhibaatada hadhow.
Qoraal wanaagsan, laakiin dhig buugga PM! :)
Maya, anigu ma ihi - laakiin waxaan aad uga fikiray wixii aan ku qorayay baraha sannadihii ugu dambeeyay umana maleynayo inaan waqti badan ku qaatay istiraatiijiyadda iyo hoggaaminta sidii aan ku qaatay faahfaahin kooban.
Sidoo kale, furitaanka ganacsi kale oo aan lashaqeynayay (Nidaamka Koi), waxaan dooneynaa inaan xaqiijino in dollar kasta oo la qarash gareeyay ay dib ugu soo laabatay. Markaan sii wado ka shaqeynta mashruucaas, waxaan sii wadi doonaa inaan la wadaago talooyinka noocan ah.
Waxaan isku dayi doonaa inaan sii wado isku darka macro iyo micro.
Aad baad ugu mahadsantahay jawaab celinta!